Ragii weeraray Xalane oo la ogaaday in ay ka tirsanaayeen DF (Xeelad cusub) - iftineducation.com
iftineducation.com – Warar hor dhac ah oo laga helaayo dhanka Laamaha amaanka DF ayaa sheegaya in Ragii geystay weerarka xarunta Xalane ay ahaayen 12 ruux oo ka tirsanaa Maleeshiyada Alshabaab.
Ragaani weerarka fuliyay ayaa la rumeysan yahay inay ahaayen Maleeshiyaad Shan bil ka hor kasoo goostay Al-Shabaab kuwaasi oo isku soo dhiibay Ciidamada DF Somalia.
Kooxdaani weerarka geystay ayaa waxaa sidoo kale la sheegayaa inay kamid ahaayen Militeriga Dowlada, gaar ahaan cutubyo dhawaan loo soo xiray tababar, ayagoona Ujeedka ay usoo galeen Dowlada lagu sheegay inay fuliyaan weerar lagu qaado Aqalka dalka looga arimiyo ee Villa Somalia, balse marka uu weerarkaasi fashilmay ay u wareegen Xarunta xalane.
Warar hoose oo lagu kalsoon yahay oo laga soo xigtay Mas’uul ka tirsan DF Somalia, ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay aad uga cabsi qabeen weeraro kaga imaada dhanka Maleeshiyada Alshabaab, hayeeshee ay duhurnimadii shalay mar qura ka war heleen gurxanka rasaasta iyo qaraxyada ay is weydaarsanayen Ciidamada AMISOM iyo naftood haligayaashii weerarka qaaday.
Arrintan ayaa muujineysa habacsanaanta laamaha amniga iyo sirdoonka dowladda Soomaaliya, oo mar kale ku sirmay rag iska dhigaya inay Shabaab kasoo furteen, balse watay ujeedooyin gurracan.
XOG: Gaarigii lagu weeraray Xalane oo uu lahaa wasiir ka tirsan DF (Shaki jira)